တုန်ခါမျက်နှာပြင်, ဆန်ခါစစ်ခွဲခြားစက်, Rotary ဆန်ခါ - Baisheng
TD75 Fixed ခါးပတ်ပေါ်ကို
သွေးခုန်နှုန်း stand-alone ဖုန်ကောက်ခံရေး
PVC Air ကို Box ကိုဖုန်ကောက်ခံရေး
Ultrasonic Rotary ဖန်သားပြင်
သတ္တုတွင်း Ce သည်စက်နို့တိုက်ကျွေး disc ကြှေးမှေးစားပွဲတင် ...
ဘိလပ်မြေလုပ်ငန်းတွင်အဘို့အ linear တုန်ခါမျက်နှာပြင်
Powder သည် Rotary တုန်ခါမျက်နှာပြင်
ကွန်းများအတွက်လူပျိုသွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကိုမြေမှုန့်စုဆောင်း ...
အနိမ့် p အတူ PPC စီးရီးလေကြောင်း box ကိုသွေးခုန်နှုန်းအိတ် filter ကို ...
ကျနော်တို့ပြီးနောက်-အရောင်းအပြည့်အဝအသုံးပြုသူရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများရွေးချယ်ရေးနှင့် Non-စံဒီဇိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်, မှ Pre-ရောင်းချမှုမှန်ဆောင်မှုတစ်ခုအကွာအဝေးနှင့်အတူဖောက်သည်ပေးသည်, 2018 ခုနှစ်တွင်အဇာဘိုင်ဂျန်မှ 24 စုံကိုဝက်အူပေါ်ကိုတင်ပို့ခဲ့သည်။ ဆိုက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ဒီဇိုင်းအစီအစဉ်ကိုအခမဲ့အဘို့အဆွဲတပ်ဆင်အခြေခံအုတ်မြစ်ပူဇော်, ဒါပေမယ့်လည်း installation ကိုလမ်းပြပညာရှင်များစီစဉ်ခြင်းနှင့် site ပေါ်တွင်ပစ္စည်း debugging မသာ။
ထုတ်လုပ်မှု site ကို
Delivery site ကို
စီမံကိန်းကို lignin alcoholized ဇီဝနည်းပညာ 4000t
ပစ္စည်းကိရိယာများစိစစ်တိကျမှန်ကန်မှုကိုသေချာစေရန် ultrasonic တုန်ခါဖန်သားပြင်၏အသုံးပြုမှုကိုစံ
ဆက်စပ်ထုတ်လုပ်သူအဆိုအရ ultrasonic တုန်ခါမျက်နှာပြင်, ထိုဆွဲငင်အားအခြေချအတွက်အနိမ့်-သိပ်သည်းဆအစိတ်အပိုင်းရဲ့အပြားတစ်စက် (ထိုအမှုန့်နှင့်ကွက်ဆိပ်ကမ်းကိုအကြားအလင်းအဆက်အသွယ်) နှင့်စလစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတိုးတက်စေနိုင်ပါသည်ကွက်ထဲမှာ High-density ကိုသတ္တုများ၏ retention ကိုသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပြီးသုံးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆိပ်ကမ်းနှင့် ...
1. ရည်ညွှန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်အခြေခံပြီးမျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်အလွှာ၏ဝန်ဆောင်မှုအသက်တာ၌ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ 2. မျက်နှာပြင်၏မျက်နှာပြင်ပလပ်စတစ်ကျူးကျော်နဲ့ကုသလျှင်, ထုတ်ကုန်၏မျက်နှာပြင်ကောင်းစွာပြင်ပတွင်အကာအကွယ်ပတ်ဝန်းကျင်အလုပ်အတွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ဖို့အဆင်ပြေအောင်နိုင်ပါတယ်။ ယင်းပြီးနောက် ...
မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်ရဲ့ standard ကနေအဆင်ပြေအောင်ကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ nauseous နဖူးခေါက်ဆွဲမတူညီသောရည်ရွယ်ချက်အပေါ်အခြေခံထားတယ်။ အသုံးပြုတဲ့ parameters တွေကိုစီစစ်, ပြဘို့သက်ဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတန်ဖိုးများဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အသုံးမျက်နှာပြင်အရသိရသည်။ အဆိုပါလိုအပ်ချက်များကို fo ...
စီမံကိန်းကို lignin alcoholized ရှန်ဒေါင်းဇီဝနည်းပညာ 4000t
No.75 Zhongyang လမ်း, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဧရိယာ, Xinxiang စီးတီး, နန်ပြည်နယ်ရှိ 453002, တရုတ်
Linear Shaker Machine, Rotary Feeder, Table Feeder, Disk Feeder, Electromagnetic Vibrating Feeder, Vibrating Feeder, အားလုံးထုတ်ကုန်များ